पशुवली रोक्न -याली
रत्ननगर ३ कात्तिक । दशैमा गरिने पशुबली रोक्न शुक्रबार पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा सचेतना ¥याली निकालिएको छ ।
पशुपन्छी संरक्षण समूह रत्ननगरले आयोजना गरेको उक्त -यालीमा रत्ननगरका विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि, विद्यार्थी, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलगायतको सहभागी रहेको थियो ।
बह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रको भवनबाट शुरु भएको -याली टा"डी बजार परिक्रमा गरी निपनीस्थित गायत्री हरिहर मन्दिरमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । सभाका बक्ताहरुले पशुको पनि बाँच्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै उनीहरुले बलीप्रथा अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
समूहका अध्यक्ष सुराजन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रकी पार्वती दिदी, कृष्ण प्रणामी सेवा समितिका जगदिश शर्मालगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
नारायणगढ, ३ कात्तिक । नारायणगढको सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैङ्कबाटै एक व्यक्तिको मोटरसाइकल चोरी भएको छ ।
बैंकमा चेक साट्न गएका अनिल चौधरीको लु ३ प ९९९३ नम्बर मोटरसाईकल बैंकमा पसेर फर्किदाँ १५ मिनेटभित्रै चोरी भएको हो । बैंकका सुरक्षा गार्डकै आँखा अगाडिबाट मोटरसाइकल चोरी दुःखद् भएको चौधरीको भनाई छ ।
उनले हराएको मोटरसाईकल खोजिदिन प्रहरीमा निबेदन दिएको बताए ।
गरिबलाई खाद्यान्न वितरण
नारायणगढ, ३ कात्तिक । चितवन घर भइ काठमाडौंमा विभिन्न संस्थाहरु सञ्चालन गरेर बसेका युवाहरुको एक समूहले दशैंको अवसरमा पूर्वी चितवनको पिप्ले गाविसका एकसय ५० घरपरिवारलाई खाद्यान्न तथा कपडा वितरण गरेको छ ।
सबै तिर दशैं मनाइरहेका समयमा गरिब, दलितहरुले पनि दशै मनाउन भन्ने उद्देश्यले आफूहरुले खाद्यान्न तथा कपडा वितरण गरेको समूहका सदस्य रामेश्वर बस्नेतले जानकारी दिए । करिब २० जना युवाहरुको समूहले रकम संकलन गरी एकसय ५० जना वृद्धवृद्धाहरुलाई स्वीटरसमेत वितरण गरेका थिए ।
उनीहरुले प्रत्येक परिवारलाई १० किलो चामल, दुइ किलो आलु, एक किलो प्याज, एक प्याकेट तेल, एक प्याकेट नुन र आधा किलो सोयाविन वितरण गरेको उनले जानकारी दिए ।
यस अघि उनीहरुले काउलेका एकसय २० घर परिवारलाई खाद्यान्न तथा कपडा वितरण गरेका थिए । पूर्वी चितवनको चैनपुर घर भएका बस्नेत र पर्साका रामकुमार बर्ताैला, विकास बर्ताैलालगायतको सक्रीयतामा राहत बितरण गरिएको हो ।
नियम नमान्ने कार्वाहीमा
नारायणगढ, ३ कात्तिक । ट्राफिक नियम उल्लंघन गरी सवारी चलाउने ७६ जना विहीबार राती चितवनका विभिन्न स्थानमा कारवाहीमा परेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनको संयुक्त टोलीले गरेकोे चेकजा"चमा उनीहरु कारबाहीमा परेका हुन् । उनीहरुबाट प्रहरीले २० हजार छ सय ५० रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।
यस्तै, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने छजना चितवनका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका छन् । चाडबाडको समयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चेकजा"चमा कडाई गरेको बताएको छ ।
नारायणगढ, ३ कात्तिक । रमाइलो टोल विकास संस्था भरतपुर १० ले शुक्रबार टोल सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
विजय दशमीको अवसर पारी संस्थाले भरतपुरको रमाईलोचोकदेखि विशालचोकसम्मको Ôेत्रमा सरसफाई गरेको हो । संस्थाका अध्यÔ निर्मलकुमार पाख्रिनको संयोजनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
नारायणगढ, ३ कात्तिक । नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वी चितवनमा संयुक्त अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल गढिमाई गण भण्डारा, इलाका प्रहरी कार्यलय भण्डारा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा भण्डारा र स्थानीय बासिन्दाको संयुक्त बैठकले अनुगमन समिति गठन गरिएको हो ।
गाउँमा शान्ति सुरक्षाकायम राख्न, जुवातास र मादकपदार्थ सेवनमा रोक लगाउने उद्देश्यले अनुगमन समिति गठन गरिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा भण्डाराका सचिव महेश्वर थपलियाले बताए । अनुगमन भण्डारा, लोथर, कोराक, विरेन्द्रनगर लगायतका स्थानमा गरिने बताइएको छ ।
समितिले १२ बुँदे निर्देशिकासमेत जारी गरेको छ । माथिल्लो निकायको निर्देशन बमोजिम चाडपर्वको बेला शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डाराका प्रहरी नायव उपरीक्षक लोकेन्द्र मल्लले जानकारी दिए ।
नारायणगढ, ३ कात्तिक । नेपाली काग्रेस शारदानगर गाँउ कमिटीको आयोजनामा शुक्रबार शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस चितवनका जिल्ला सभापति टेकप्रसाद गुरुङ प्रमुख आतिथि तथा शारदानगरका क्षेत्रीय सभापति हुमबहादुर क्षेत्रीले अध्यक्षता गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य कैलाश कोइराला, पूर्व जिल्ला सभापति तोपमान गुरुङ, क्षेत्र न ४ का सभापति बलराम पौडेललगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
नदी किनारको मुर्तिमा प्राणप्रतिष्ठा
नारायणगढ, ३ कात्तिक । नारायणी टोल सुधार विकास संस्थाले शुक्रबार नारायणी नदी किनारमा शिव–पार्वती र गणेशको मुर्तिको प्राण प्रतिष्ठा गरेको छ । संस्थाले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मुर्तिमा प्राण प्रतिष्ठा गराएको हो ।
उक्त मुर्तिको करिव छ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको र त्यसको सवै खर्च टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष तथा स्थानीय समाजसेवी शुक्रकुमार श्रेष्ठले सहयोग गरेको शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा समाजसेवी कृष्णकुमारी श्रेष्ठ, भगवानकुमार जोशी, भीमबहादुर श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कल्याण जोशीलगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
नारायणगढ, ३ कात्तिक । अनेरास्ववियु क्षेत्रीय कमिटी क्षेत्र नं. २ को आयोजनामा पूर्वी चितवनको टाँडीमा दशै तथा तिहारको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
क्षेत्रीय कमिटीका अध्यक्ष हरि श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा एमाले चितवनका अध्यक्ष जगन्नाथ थपलियाले शान्तिको बाधक वर्तमान प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई दशैं–तिहारभित्र राजीनामा गर्न बाध्य पारिने बताए । राजनैतिक गतिरोधले मुलुक झन् संकटमा परेको भन्दै उनले निकासको लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आवश्यक भएको बताए ।
कार्यक्रममा रत्ननगरका पूर्व नगर प्रमुख, नारायण वन, यादव पाठक, उत्तम अधिकारी, गोविन्द अर्याल, राधा परियार, राजेन्द्र पोखरेल, केशव आचार्य लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
यसैगरी दसैंको अवसरमा दियालो क्लव परिवार नारायणगढले सडक बालबालिकास"ग शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
क्लवका कार्यकारी निर्देशक केदारनाथ खनालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सडक बालबालिकाबीच स्वास्थ्य तथा सरसफाई प्रतियोगिता पनि सञ्चालन गरिएको थियो । कार्यक्रममा सरसफाइले स्वास्थ्यलाई पार्ने सकरात्मक प्रभावका विषयमा जानकारी गराइएको थियो ।
प्रतियोगितामा राजु क्षेत्री प्रथम, सन्तोष क्षेत्री दोश्रा र आशिस श्रेष्ठ तेश्रा भएका थिए ।
नारायणगढमा सोनीको शोरुम
नारायणगढ, ३ कात्तिक । नारायणगढको पुलचोकमा सोनी इलेक्ट्रोनिक्सको बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । सोनीको नयाँ शोरुम शुभकामना इलेक्ट्रोनिक्स शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष डाक्टर तिलचन्द्र भट्टराईले शोरुमको उद्घाटन गरे । उक्त अवशरमा मन्तव्य राख्दै उनले राजधानी केन्द्रित रहने यस्ता पसल राजधानीबाहिर सञ्चालनमा आउँदा उपभोक्ताहरुलाई सहज हुने बताए ।
सोनी ब्राण्डले बजारमा भखैरैमात्र ल्याएका विभिन्न किसिमका सामान पसलमा राखिएको शोरुमका सञ्चालक सूर्यभक्त अधिकारीले बताए । पसलमा डिजिटल क्यामरा, एलसीडी, एलइडी टिभी, फ्रिज, म्यूजिक सिस्टम, लगायतको सामाग्री राखिएको छ । शोरुम नारायणगढ मलमा छ ।
एमाले चितवनको निर्णय
भरतपुर, ३ कात्तिक । नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी चितवनको तेश्रो पूर्ण बैठकले पार्टीको एक बर्षे योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी पारित गरेको छ ।
एमाले चितवनका अध्यक्ष जगन्नाथ थपलियाको अध्यक्षतामा भएको बैठकले चाडपर्वको समयमा मुल्यबृद्धि गर्ने, कृतिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्न प्रशासनसँग मागसमेत गरेको छ ।
बैठकले जिल्लाका बिभिन्न क्षेत्रमा किसानका धानबालीमा किराबाट नोक्सान भएको र माडीका विभिन्न ठाउँमा जगली हात्तीले धानबाली नष्ट गरेको हँुदा हात्ती आतंकबाट जनताको जिउ धनको सुरक्षा गर्न र क्षतिको तत्काल क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
बैठकमा पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेल प्रमुख अतिथी रहेका थिए । एमाले चितवनको बैठकले शनिबार बिहान पार्टी कार्यालयमा शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रम राखेको बैठकपछि जारी बिज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरुलाई स्वागत
खैरहनी, ३ कात्तिक । खैरहनी उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबार चितवनका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई स्वागत गरेको छ ।
पूर्वी चितवनको पर्सामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भर्खरै जिल्लामा सरुवा भएर आएका प्रहरी उपरीक्षक दिपककुमार थापा र गणिमाई गण भण्डाराका गणपति गणेशबहादुर थापालाई स्वागत गरिएको हो ।
कार्यक्रममा जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था राख्न चितवनका प्रहरी प्रमुखहरुले प्रतिवद्धता जनाएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक थापाले आफनो पहिलो प्राथमिकता चितवनमा बढ्दै गएको गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्ने रहेको बताए । जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले गुण्डागर्दी धेरै दिन नटिक्ने बताए ।
यस्तै गढिमाई गण भण्डाराका गणपति गणेशबहादुर थापाले जनतालाई शान्ति सुरक्षाको महसुस गराउन आफूहरु दिनरात खटिरहेको भन्दै नेपाल प्रहरीसँग मिलेर काम अघि बढिरहेको बताए । प्रहरीले मात्र अपराध न्यूनिकरण गर्न नसक्ने भएकाले सवैको सहयोग र समन्वयको आवश्यकता रहेकोमा थापाले जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दवाडीले चितवनमा रहेको प्रहरी प्रमुखहरुको टिम सक्षम भएको र समन्वय गरी अघि बढेकाले शान्ति सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी नराखिने बताए ।
उद्योग वाणिज्य संघ खैरहनीका अध्यक्ष केशवराज पाठकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीका गोपाल परियार, काँग्रेसका भजनप्रसाद मुडवरी, एमालेका राजु सेढाई, मालेका शिवप्रसाद खनिया, हिमालयन बैंक पर्र्सा शाखा प्रमुख शान्ता अधिकारी, निवर्तमान अध्यक्ष बलराम अर्याल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
मासुमा अनुगमन गर्न आग्रह
खैरहनी, ३ कात्तिक । मासु व्यवसायीहरुले बाख्रीको मासुलाई खसीबोकाको भनेर महँगो मुल्यमा बिक्री गरिररेको भन्दै उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चले स्थानीय प्रशासनसँग अनुगमन र कार्वाहीको लागि अनुरोध गरेको छ ।
स–साना पाठी, गर्भवती बाख्री र अस्वथ्यकर बुढिबाख्री समेतको मासु बिक्री भैरहकोले उपभोक्ताहरु स्वास्थ्य र आर्थिक दुवै पक्षमा असर परेको मञ्चले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
चितवन जिल्लामा पशु बधशाला स्थापना नभएको र मासु जाँच ऐन २०५५ पनि लागु नभएको भन्दै नगरपालिकालाई उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चले बधशाला निर्माण र ऐन लागु गर्न मागसमेत गरेको हो ।
चितवनका प्रहरी प्रमुखलाई रत्ननगरमा स्वागत
रत्ननगर, २ कात्तिक । रत्ननगर उद्योग बाणिज्य संघ चितवनले बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपककुमार थापालाई स्वागत गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय अगुवाहरुले ब्यवसायीमाथि पटकपटक आक्रमण भैरहेको र आक्रमणका दोषिमाथि कारवाही नभएकाले असुरक्षाको महसुस भएको बताएका थिए । नयाँ प्रहरी प्रमुखको आगमन र पृष्ठभूमिले चितवनका ब्यवसायी आफ्नो सुरक्षाका विषयमा आशावादी भएको वताउँदै कार्यक्रमका वक्ताहरुले त्यसलाई मुर्तरुप दिन आग्रह गरेका थिए ।
रत्ननगर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष दीपककुमार कर्माचार्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पूर्व सांसद जागृतप्रसाद भेटवाल, संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, संघका सल्लाहकार तथा रत्ननगर नगरपालिकाका संस्थापक प्रमुख नारायण वन, संघका पूर्वअध्यक्ष गोपालराज कर्माचार्यलगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
उनले सबै ब्यवसायी एकजुट भए शान्ति सुरक्षा ब्यवस्था गर्न सहज हुने बताए । ब्यवसायीले टेण्डरका लागि गुण्डाहरुको प्रयोग गर्न लागेकाले समस्या सृजना भएको भन्दै उनले यसले राजनीतिक संरक्षण गरिने हुनाले डनहरुको विकास भएको बताए । ब्यवसायीको साथ र प्रहरीको हात मिले कसैले केही गर्न नसक्ने उनको भनाई थियो ।
बालिकामाथिको हिंसामा कमी आएन
नारायणगढ, २५ असोज । नेपालमा बलियो कानूनी ब्यवस्था नभएका कारण बालिकामाथि हुने गरेका हिंसा न्युनिकरण हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय बालिका दिवसको अवसरमा बिहीबार दियालो परिवार नारायणगढले आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् । महिला हिंसाको शुरुवात गर्भबाटै हुने भएकाले यसको अन्त्यका लागि अझ कठिन भएको उनीहरुको भनाई छ ।
कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले बालिकामाथि हुने हिंसाका घटना पछिल्ला दिनमा झनै बृद्धि भएको बताए । उनले गरिब परिवारमात्र नभई उच्च बर्गमा समेत महिला र बालिका हिंसा पर्ने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला विकास समितिका सामाजिक विकास अधिकृत कृष्णजयन्ती पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले नेपालमा १५ वर्षभन्दा कम उमेरका विवाह गर्ने १० प्रतिशत र १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने बालिकाको सख्या ५१ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।
संयुक्त राष्ट्र संघको निर्णय अनुसार यस बर्षदेखि प्रत्येक वर्षको अक्टोबर ११ का दिन बालिका दिवस मनाउन शुरु गरेको हो । बालिका दिवसको औपचारिक उद्घाटन अमेरिकाको न्यूयोर्कमा बिहीबार गरिएको छ ।
दिवसको यसपटकको नारा ‘दि"उ उज्यालो, केलाऔं भविष्य’ रहेको छ । विभिन्न अध्ययनहरुले नेपाललगायत विश्वमै बालकभन्दा बालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, श्रमलगायत क्षेत्रमा विभेद भइरहेको देखाएको छ ।
पिप्लेमा जनचेतना कार्यक्रम
नारायणगढ, २५ असोज । जुटपानी स्वास्थ्य केन्द्रको आयोजनामा पूर्वी चितवनको पिप्लेमा स्वास्थ्य सम्वन्धी जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
गाउँमा रेविज रोगको संक्रमण फैलिएको आशंकाले स्थानीयवासी त्रसित भएपछि चिकित्सकको टोलीले जनचेतना कार्यक्रम गरेको हो । केही दिन अगाडि विरामी भैसीको मासु खाँदा केहि स्थानीयवासी विरामी परेका थिए ।
स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. सुनिल पन्तको नेतृत्वमा गएको टोलीले रेविजका विषयमा जानकारी दिएपछि त्यहाँका अवस्था सामान्य बनेको र त्रासको वातावरण हटेको चिकित्सक पन्तले बताए ।
नगरभित्रका मासु पसलमा अनुगमन
नारायणगढ, २५ असोज । भरतपुर नगरपालिकाले नगरभित्रका मासु पसलहरुमा बिहीबार अनुगमन गरेको छ । नगरपालिकाको टोलीले मासुको शुद्धता, पसलको सफा सुग्घर र विक्री गर्ने स्थानको अवस्थाको विषयमा अनुगमन गरेको हो ।
अनुगमनपछि हरेक पसलमा नगरपालिकाले जारी गरेको मासु पसलले मान्नुपर्ने निर्देशिका २०६४ र आचारसंहिता टाँस गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका खाद्य निरीक्षक नविन देउजाले जानकारी दिए । टोलीले सबै पसलले अनिवार्य आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने र मासु पसल सफा राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
मासु पसलले मासु बिक्री गर्ने स्थान सफा राख्नुपर्ने, पानी मिसाएको मासु बिक्री गर्न नपाइने, ढक तराजु सहि हुनुपर्ने, छाला फालेरमात्र मासु विक्री गर्नुपर्ने, मूल्यसुचि राख्नु पर्नेलगायत निर्देशन गरेका छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई फिसलिङमा आउने
नारायणगढ, २५ असोज । प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई शुक्रबार चितवनको कुरिनटार गाविसको फिस्लिङ आउने भएका छन् ।
चितवन र गोरखा जोड्ने फिस्लिङको झोलुङ्गे पुल उद्घाटन गर्न उनी चितवन आउन लागेका हुन् । दुई जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री आउने भएपछि त्यस क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ ।
झोलुङ्गे पुलको उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री गोरखा र तनहुँको विभिन्न स्थानमा भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले जानकारी दिए ।
एकवर्ष अगाडि फिस्लिङ्मा रहेको झोलुङ्गे पुलको लठठ चुडिँदा तीन जनाको ज्यान गएको थियो ।
नारायणगढ, २५ असोज । फूलवारी गाविसमा जाँड, रक्सी, जुवातास, लागु औषधविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम विहीबार सम्पन्न भएको छ ।
गाविस सचिव रामकुमार श्रेष्ठ प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा गोपालगञ्ज प्राविका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद सापकोटा, हेल्थपोष्ट इन्चार्ज लिलाधर पौडेल, नेकपा माओवादीका शालिकराम पौडेल, नेकपा एमालेका खिमनाथ न्यौपाने, श्रम नेपालका कार्यक्रम निर्देशक सूर्यवदना हमाललगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
जिल्ला अधिवेशन हुने
नारायणगढ, २५ असोज । नेकपा माओवादी निकट सेक्युरिटी मजदुर संघ चितवनको आगामी शुक्रबार पहिलो जिल्ला अधिवेशन हुने भएको छ । अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
पार्टी बिभाजनपछि सेक्युरिटी मजदुरहरुले नयाँ क्रान्तिकारी सेक्युरिटी मजदुर संघ अधिवेशन आयोजक कमिटी तयार गरेका थिए । अधिवेशन आयोजक कमिटीका राजकुमार ढकालका अनुसार कार्यसमितिका २१ मध्ये १३ जना नयाँ कमिटीमा छन् ।
अधिवेशनमा जिल्लाभरीका तीनसय मजदुर प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने आयोजक कमिटीका अध्यक्ष कुलप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । अधिवेशनको उद्घाटन केन्द्रीय अध्यक्ष शालिग्राम काफ्लेले गर्ने जनाइएको छ ।
नारायणगढ, २५ असोज । नेपाली काँगे्रस वडा समिति भनपा ४ को आयोजनामा बिहीबार ‘विपीको समाजवाद विषयक’ वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ ।
काँग्रेसको वडा समितिले आयोजना गरेको अन्तर क्रियासिल सदस्यस्तरीय बक्तृत्वकला प्रतियोगितामा कार्यकर्ताहरुले विपीको समाजवाद व्यवहारमै लागु हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए ।
उक्त प्रतियोगितामा बद्रीनाथ पोखरेल प्रथम, रीता पण्डित दोश्रा, तारामित्र पण्डित तेश्रा र विजया रेग्मीले सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गरे । प्रतियोगिताको निर्णायकहरुमा श्रीभक्त अच्युत वाग्ले, शालिकराम शर्मा र डा. सूर्यकान्त घिमिरे रहेका थिए ।
वडा समितिका सभापति चन्द्रमित्र पण्डितको अध्यक्षता एवम् नेपाली काँग्रेस चितवनका सभापति टेकप्रसाद गुरुङको प्रमुख अाितथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला सचिव जितनारायण श्रेष्ठ, क्षेत्रीय सभापति प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, तरुण दलका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ, नेविसंघ जिल्ला अध्यक्ष उत्तम जोशी लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
नारायणगढ, २५ असोज । ईलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटको आयोजनामा बिहीबार गैंडाकोट क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरु र प्रहरीबीच घरेलु मदिरा तथा लागु औषध नियन्त्रणका लागि छलफल र अन्तत्र्रिmया भएको छ ।
अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा घरेलु मदिरा गैंडाकोटका कुनै पनि होटलले बिक्री नगर्ने, लागु औषध दुब्र्यसन र ओसारपसार गर्ने, देह व्यापार तथा जुवातास खेल्ने खेलाउने व्यक्तिहरु थाहा भएमा तुरुन्त प्रहरीलाई खबर गर्ने सहमति भएको गैंडाकोटका प्रहरी निरीक्षक डिल्लीनारायण पाण्डेले बताए ।
दशैंतिहारमा नयाँ योजना
नारायणगढ, २५ असोज । नेशनल मोवाइल हव अन्तर्गत स्मार्ट फोन क्याफे नारायणगढले दशै तिहारको अवसरमा नयाँ योजना बजारमा ल्याएको छ ।
योजना अन्तर्गत ग्राहकले विभिन्न उपयोगी सामाग्री प्राप्त गर्ने छन् । खुलजा सामसुङ मोवाइल उपहार योजनामा ग्राहकले प्रत्येक सामसुङ मोवाइल खरिद गर्दा नगद, मोवाइल र घडी प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीका सेल्स म्यानेजर प्रकास प्रछाइले जानकारी दिए ।
पिठुवा, २५ असोज । कृषकहरुलाई पशुपालनमा आकर्षित गराउन स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गरिएको पाञ्चायन दाना उद्योगको प्रभावकारिताको विषयमा बिहीबार पिठुवामा सार्वजिनिक सुनुवाई गरिएको छ ।
पिठुवा–७ माधवपुरमा रहेको पाञ्चायन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागिहरुले उद्योगबाट उत्पादन हुने दाना गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले कृषकलाई सस्तो र गुणस्तरीय दाना उपलब्ध गराउन उद्योगको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. विष्णुकुमार श्रेष्ठले सामाजिक भावनाले स्थापना गरिएको उक्त उद्योगले गुणस्तरीय दाना उत्पादन र मुल्य घटाउनु पर्ने बताए । दाना उत्पादन गर्दा त्यसमा हुने मिसावटले पशुको स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका सहसचिव रामकृष्ण दवाडीले पशुपालन व्यवसायप्रति राष्ट्रको नीति स्पष्ट नहँुदा कृषकले अपेक्षाकृत सफलता हात पार्न नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा प्राक्टिकल एक्सनका प्रकाश पौडेल, फरवार्डका ध्रुवप्रसाद पाण्डे, एकीकृत माओवादीका रमेश लामिछाने, नेपाली काँग्रेसका दण्डपाणि लामिछाने, नेकपा–माओवादीका लक्ष्मी न्यौपानेलगायतले मन्तव्य राखेका थिए । संस्थाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
गुणस्तरीय बिउबिजन विक्री गर्न आग्रह
रत्ननगर, २५ असोज । गुणस्तरीय बीउ उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण उपआयोजनाको सञ्चालनको विषमा रत्ननगरमा सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको छ ।
नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालय अन्र्तगत व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना तथा विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सो उपआयोजानाको बारेमा छलफल गरिएको थियो ।
मल्ल बीउ विजन सप्लायर्स रत्ननगरले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा विज्ञहरुले गुणस्तरीय बीउको प्रयोगले मात्र उत्पादन बढाउन सकिने बताए । बीउको गुणस्तरीयतालाई ख्याल गर्न सके २५ प्रतिशत उत्पादन बढाउन सकिने बक्ताहरुको भनाई रहेको थियो ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनको प्रमुख जगन्नाथ तिवारी प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा कृषि तथा व्यापार आयोजनाका अर्थविद् राजेन्द्र शर्मा, बाली संरक्षण अधिकृत दिपक भट्टराई, न्यू क्यापिटल कलेजका प्राचार्य शिव सुवेदी, शहीदस्मृति बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख गोकर्ण मल्ल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । उपआयोजनाका सदस्य रामचन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
विद्युत महशुल बक्यौता उठाउने अभियान
नारायणगढ, २५ असोज । विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा ठूलो सफलता पाएको विद्युत प्राधिकरण भरतपुर शाखाले बक्यौता रकम उठाउने अभियान थालेको छ ।
धेरै चुहावट हुने पश्चिम चितवनको विभिन्न स्थानमा छड्के कार्वाही प्रकृया अगाडि बढाएपछि चुहावट कमी आएको प्राद्यिकरणका प्रवक्ता सुरेश पण्डितले जानकारी दिए । प्राधिकरणले एक वर्षदेखि चुहावट नियन्त्रण गर्न छड्के अनुगमन थालेको थियो ।
विद्युत चुहावटमा कमी आएकाले अहिले वक्यौता रकम उठाउने अभियानमा लागेको प्रवक्ता पण्डितले बताए । अभियान अन्तर्गत लामो समयदेखि धेरै बक्यौता रहेका संघसंस्था र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा ताकेता गरेको उनले बताए ।
प्राधिकरणले जिल्लामा सबैभन्दा धेरै विद्युत चुहावट हुने पश्चिम चितवनको मंगलपुर, शुक्रनगर, पटिहानी, गीतानगर, रामपुर, गुञ्जनगरलगायतको क्षेत्रमा विद्युत चुहावट नियन्त्रण अभियान थालेको थियो । अभियानका क्रममा प्राधिकरणको टोलीले विद्युत चोरी गर्ने ग्राहकलाई नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना गराई छाड्ने गरेको थियो । अभियान निरन्तर जारी राखेपछि अहिले त्यस क्षेत्रमा ८० प्रतिशतबढि चुहावट नियन्त्रण भएको प्रवक्ता पण्डितले बताए ।
रत्ननगरको अस्पतालरोड विस्तार गरिँदै
रत्ननगर, २५ असोज । रत्ननगर नगरपालिकाभित्रको अस्पतालरोड विस्तार गर्ने काम शुरु गरिएको छ । राजमार्गदेखि नविनचोकसम्मको सडक खण्ड विस्तार गर्न लागिएको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाले जानकारी दिए ।
उक्त सडक खण्ड अहिले चार मिटर कायम रहेको र विस्तार गरी ११ मिटर बनाउन लागिएको हो । करिव डेढ किलोमिटर लामो उक्त सडकको अधिकाँश भाग यसअघि नै बिस्तार गरिसकिएको र बाँकी रहेको डेढ सय मिटर सडक अहिले विस्तार गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
स्थानीयवासीकै सक्रीयतामा विस्तार गर्न लागिएको सडकमा नगरपालिकाले कालोपत्रे समेत गर्ने योजना रहेको कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए । उक्त सडक विस्तार गर्दा घर नपर्ने र कम्पाउण्ड परे भत्काउने पूर्व सहमति भएको सडक मर्मत तथा विस्तार समितिका अध्यक्ष शेषनाथ अधिकारीले बताए ।
यदि कुनै घर परेमा पनि तत्काल घर नभत्काउने र नयाँ घर बनाउँदा नगरपालिकाको मापदण्ड बमोजिम गर्ने सहमति भएको उनले बताए । सडक विस्तारको काम आगामी कार्तिक महिनाभित्र सक्ने योजना रहेको नगरपालिकाले बताएको छ ।
बीसहजार जेसीजको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम
नारायणगढ, २५ असोज । बीसहजार जेसीज भरतपुरले बिहिबारदेखि जेसीज सप्ताह मनाउन शुरु गरेको छ ।
जेसीजले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत अनाथालयका बालबालिकालाई शैक्षिक सामाग्री वितरण, खेलकुद कार्यक्रम, राजनैतिक गतिरोधको निकासकालागि दलहरुसँग छलफल, विभिन्न जेसीजहरुसँग अन्तरसंवाद लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन हुने पूर्व अध्यक्ष भोजराज देवकोटाले जानकारी दिए ।
असोज २५ देखि कार्तिक १ गतेसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रमको स्थानीय विकास अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी बास्तोला, जेसिजका अध्यक्ष उत्तम जोशी, महासचिव रमेश वस्ताकोटीलगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
लागुपदार्थ बिरुद्ध होर्डिङ बोर्ड
नारायणगढ, २५ असोज । रोटरी क्लब अफ चितवनले बिहीबार नारायणगढको पुल्चोकमा ‘लागुऔषध सेवन नगरौं’ लेखिएको होर्डिङबोर्ड राखेको छ ।
लागुऔषधको प्रयोगले समाजमा नकारात्मक असर परेकाले होडिङ बोर्डमार्फत सबै वर्गलाई सचेत गराउन र शिक्षा दिनका लागि होडिङबोर्ड राखिएको, रोटरी क्लब अफ चितवनले जनाएको छ ।
क्लबका अध्यक्ष उत्तमलाल चुकेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले उक्त होर्डिङ बोर्ड उद्घाटन गरेको थिए ।
काँग्रेसलाई कसैले झुक्याउन सक्दैन : सिंह
रत्ननगर, १ कात्तिक । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले कसैले झुक्याउन खोज्दैमा काँग्रेस नझुक्किने बताएका छन् ।
पूर्वी चितवनको पिठ्वामा आयोजित सुरेन्द्र कँुवरको दसौं दिनको शोकसभामा बोल्दै उनले एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले विभिन्न बहाना बनाएर काँग्रेसलाई भुलाउने प्रयत्न गरिरहेको भन्दै यसतर्फ काँग्रेस सजक रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
माओवादीको षड्यन्त्र आफूहरूलाई राम्ररी थाहा भएको भन्दै उनले माओवादीकै कारण देशले निकास नपाएको दाबी गरे ।
विशेष परिस्थितिमा काँग्रेसले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै अहिले सरकारभन्दा पनि शान्ति स्थायित्व काँग्रेसको प्रमुख विषय रहेको उनको भनाइ थियो ।
काँग्रेस केन्द्रीय समितिले बैठक छिट्टै बसेर राजनीतिक निकासको बारेमा ठोस निष्कर्ष निकाल्ने भन्दै उनले काँग्रेसका आधिकारिक धारणा भने त्यसपछिमात्रै आउने बताए ।
जनस्वास्थ्यको टोली पिप्ले जाने
नारायणगढ, २४ असोज । रेविज लागेको भैसीको मासु खाएको हल्ला फैलिएपछि रोगका विषयमा जानकारी दिनको लागि विहीबार स्वास्थ्यकर्मीको टोली जाने भएको छ ।
जुटपानी स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टर सुनिल पन्तको नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली त्यसतर्फ जाने भएको जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । रेविज रोगका विषयमा जनचेतना जगाउन टोली जाने तयारी गरेको भेक्टकन्ट्रोलर केसीले जानकारी दिए ।
नारायणगढ, २९ असोज । पश्चिम चितवनको पटिहानीमा रहेको उन्नतबिज बृद्धि कृषक समूहले सोमबार संस्थाको गतिविधी सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
संस्थाले गुणस्तरीय तथा मुल बिउ उत्पादन गरी चितवनसहित देशैभर निर्यात गर्दै आएको छ । परम्परागत रुपमा सञ्चालित कृषि प्रणालीलाई अत्याधुनिक तबरले सञ्चालन गर्न सहयोग गर्दै आएको संस्थाले उत्पादनमा बृद्धि गराउनु एबम कृषकको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भुमिका निवार्ह गर्दै आएको छ ।
जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय चितवनका प्रमुख जगन्नाथ तिबारीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा पटिहानी गाविसका सचिव दामोदर भट्टराई, स्थानीय राजनैतिक दलका पार्टी प्रतिनिधि, कृषक शंकरराज थपलिया लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
नीति परिवर्तनको खाँचो
नारायणगढ, २३ असोज । सरकारले कृषि नीति परिवर्तन नगरेसम्म नेपालमा मौरीपालन ब्यवसायिक हुन नसक्ने मौरी पालक किसानहरुले बताएका छन् ।
मंगलबार सागर मौरीपालन उद्योग गैंडाकोटले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्ने किसानहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
मौरीपालक किसानहरुका लागि लगानीको सुनिश्चितता, चरन क्षेत्रको ब्यवस्था लगायतका समस्या भएकाले सरकारले यसको ग्यारेन्टी गर्नसमेत कृषकहरुले माग गरेका छन् । सार्वजनिक सुनुवाईमा बोल्दै गैंडाकोट गाविसका सचिव पदम घिमिरेले सरकारले किसान प्रोत्साहनको प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताए ।
कृष्ण खनाल निर्बिरोध
भरतपुर, २७ असोज । नेकपा (एमाले) क्षेत्र नं. २ को राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्यमा कृष्णप्रसाद खनाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
नेकपा एमाले जिल्ला पार्टी कार्यालयमा शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा उक्त पदमा खनालबाहेक अन्य कसैको पनि उम्मेदवारी परेन । खनाल यसअघि जिल्ला कमिटी चितवनको अध्यक्ष रहेका थिए ।
खनाल एक जनाकोमात्र उम्मेदवारी परेपछि निर्वाचन समितिका संयोजक रामकुमार तिवारीले खनाललाई सर्वसम्मत निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए । यसअघिका परिषद् सदस्य जगन्नाथ थपलिया पार्टी जिल्ला अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उक्त स्थान रिक्त भएको थियो ।
यसैबीच नेकपा एमाले चितवनका अध्यक्ष जगन्नाथ थपलियाको अध्यक्षतामा र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् भारत प्रवास इन्चार्ज देवी ज्ञवालीको प्रमुख आतिथ्यमा नवनिर्वाचित सदस्यलाई बधाई ज्ञापन गरिएको छ ।
कार्यक्रममा नवनिर्वाचित सदस्य खनालले आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष जगन्नाथ थपलिया, निर्वाचन समितिका संयोजक रामकुमार तिवारी र प्रमुख अतिथि ज्ञवालीले मन्तव्य राखेका थिए ।
हावाहुरीले एक करोडको केरा नष्ट
चितवन, १९ असोज । बिहीबार राति वर्षासँगै आएको हावाहुरीले चितवनमा किसानका एक करोड बढीको केरा नष्ट भएको छ ।
बिहीबार साँझ एक्कासी हावाहुरी र ठूलो वर्षा भएपछि किसानका भर्खर पोसाएका केराका बोट ढलेर नष्ट भएको हो ।
हावाहुरीले केरा ढालेपछि एक करोडभन्दा बढीको क्षति भएको केरा व्यवसायी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद सुवेदीले दाबी गरे ।
विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएकामध्ये २५ प्रतिशत केरा हावाहुरीले नष्ट पारेको उनले जानकारी दिए । पूर्वी चितवनको रत्ननगर १, ८, ११ र १२ नम्बर वडामा किसानले लगाएका केरा नष्ट भएका छन् । त्यस्तै पिठुवा, चैनपुर, पदमपुरलगायतका गाविसका केरा पनि हावाहुरीले नष्ट पारेको छ ।
पश्चिम चितवनका किसानका केरा पनि हावाहुरीले नष्ट पारेको उनीहरूले बताएका छन् । विगतका वर्षमा चैत्र, वैशाखतिर हावाहुरीले केरा नष्ट गर्ने गरेकामा यसवर्ष असोजमा हावाहुरीले केरा नष्ट पारेको किसानहरूले बताए ।
चितवनमा वर्षेनी २५ करोड रुपैयाँ बराबरको केरा उत्पादन हुने गर्छ । चितवनमा तीन सय ७५ किसानले केरा खेती गर्ने गरेका छन् ।
विश्व शान्ति महायज्ञको तयारी पूरा
चितवन, १९ असोज । बृद्धाआश्रम तथा बौदिक पाठशाला निर्माणका लागि सदरमुकाम भरतपुरमा आयोजना गरिने विश्व शान्ति महायज्ञको तयारी पूरा भएको छ ।
शनिबारदेखि शब्द चिन्तनको आयोजनामा भरतपुरमा विश्व शान्ति महायज्ञ शुरु हँुदै छ । महायज्ञको पूर्व सन्ध्यामा शुक्रबार ¥याली निकालिएको छ । ¥यालीले भरतपुर क्षेत्रका विभिन्न स्थान परिक्रममा गरेको थियो । शनिबारदेखि शुरु हुने महायज्ञ २७ गतेसम्म चल्नेछ ।
महायज्ञ सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न समिति उप–समितिहरु गठन गरिएको शव्द चिन्तन संघका अध्यक्ष मुक्तिप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार महायज्ञमा दैनिक २५ सयदेखि तीन हजारबढि भक्तजन सहभागी हुनेछन् । सातकरोड रुपैयाँ आर्थिक सङ्कलन गर्ने अपेक्षा गरिएको महायज्ञमा दिनबन्धु पोखरेलले कथा बाचन गर्नेछन् । भरतपुर नगरपालिका वडा नं. १२ गोन्द्राङस्थित भक्तशंके चोकमा आयोजना गर्न लागिएको महायज्ञमा सहभागिता जनाउन शब्द चिन्तन संघले भक्तजनहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
पावर्तीपुरमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा
नारायणगढ, १९ असोज । आगामी असोज २६ गते पावर्तीपुर गाविसलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा पूर्णरुपमा लागु भएको घोषणा गरिने भएको छ ।
शुक्रबार पार्वतीपुर गाविसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी गराइएको हो । नेपाल सरकार शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनको सहयोगमा लागु भएको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्याक्रम अन्तर्गत विद्यालय जाने उमेर ५ देखि १२ वर्षका बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेश गराईएको छ ।
विद्यालय आएर पनि विद्यालय छाडेका विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा पुनः प्रवेश गराईएको जानकारी गराईएको थियो । बालबालिकाहरुको विद्यालय नियमित गराउने, विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराई विद्यालय प्रवेश गराउने, विपन्न परिवारका अभिभावको समूह बनाई आयमूलक काम गर्न रकम उपलव्ध गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत सात वटा विद्यालयका ३० जना विद्यार्थीलाई एक हजारका दरले रकम उपलव्ध गराईएको छ ।
तीनवटा विद्यालयमा अभिभावकलाई साझेदारी कोष स्वरुप १०–१० हजार रुपैंयाँको कोष खडा गरिएको, विद्यालयबाहिर रहेका २० जना बालवालिकालाई विद्यालय प्रवेश गराइएको जानकारी गराइएको थियो । गाविसमा रहेका कूल जनसंख्याको ८८.४९ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर रहेको पावर्तीपुर गाविसमा महिलाको साक्षरता दर २४.४५ प्रतिशत र पुरुषको ७५.५ प्रतिशत रहेको छ ।
विद्यालय जाने उमेर ५ देखि १२ वर्षका एक हजार चार सय ८८ बालबालिकामध्ये हाल सवै विद्यालय पहँुचमा रहेका छन् । चितवनका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्मा प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा विद्यालय निरीक्षक राजु बानियाँ, श्रोतव्यक्ति राधाकृष्ण घिमिरे, एमाओवादीका बालकृष्ण सुवेदी, नेपाली काँग्रेसका भरतप्रसाद लामिछाने, नेकपा एमालेका कमलप्रसाद पौडेल, जिल्ला पारलिगल कमिटी चितवनकी भगवती श्रेष्ठ लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
मानव बेचबिखन विरुद्ध सचेतना तालिम
नारायणगढ, १९ असोज । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार अपराधलाई कम गर्ने उद्देश्यले नारायणगढमा सरोकारवालालाई तीन दिने तालिम शुरु भएको छ ।
फरक फरक तरिकाले, विभिन्न नाममा मानवको बेचविखन गर्ने क्रम वृद्धि भइरहेकाले यसलाई निरुत्साहित गर्दै दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरोकारवालाहरुलाई तालिम दिइएको बताइएको छ ।
कानून अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र सेलर्डको आयोजना तथा जेनेभा ग्लोवलको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत कर्मचारी, अधिवक्ता, सामाजिक संघ–सस्थाका प्रतिनिधी, वैदेशिक रोजगार तथा मानव वेचविखन सम्वन्धी समाचार लेखन गर्ने पत्रकारलगायत तालिममा सहभागी छन् ।
पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारको नाममा पनि मानव वेचविखन भएकाले यसतर्फ समाजका हरेक निकायले ध्यान दिनुपर्ने तालिमका प्रशिक्षक राममणि गौतमले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारमा लगाइ दिन्छु भन्दै मानिसको बेचविखन भएका घटनाहरु धेरै छन्’ प्रशिक्षक गौतमले भने ‘अपराध अनुसन्धान र न्यायको क्षेत्रमा लागेकाहरुले यसतर्फ सचेत र अझ बढी जिम्मेवार हुनु पर्दछ ।
कार्यक्रममा चितवन जिल्ला अदालत बार एशोशियसनकी उपाध्यक्ष छायाँकुमारी चन्द, अधिवक्ता फूलमाया रानाभाट, रामकृष्ण अधिकारीलगायतले मन्तव्य राखेका थिए । तालिमको आइतबार समापन गरिनेछ ।